Tsy maintsy hipoaka ny sarom-bilany | mandimby maharo
Tsy maintsy hipoaka ny sarom-bilany
Posted on 18 March 2013 by Mandimby Maharo
Herinandro vitsy lasa izay, nisy rombo tany Mandritsara ary dia raikitra ny fitsaram-bahoaka. Na ireo mpitandro filaminana aza tsy nahafehy ny hatezeran’ny olona nanakana ny fiara manidina nitondra ireo mpitondra fanjakana saika handravona ny raharaha. Taloha kelin’io dia nifanenjehana ny dahalo tany Atsimo ka izay rehetra noahiahina ho dahalo na mpisikidy mpiaro dahalo dia naripaky ny fokonolona avokoa. Efatra taona lasa izay, noraisin’ny miaramila teo amin’ny vozonakalony ny pasitera Rasendrahasina. Noapangaina ho mpivarotra tanindrazana. Nogejaina sy nodarohana. Fa hafa raha samy hafa ny nanjo ny pasitera Maihol ny sabotsy 16 marsa lasa teo. Fifamalin’ny mpiambina azy sy ny mpitatitra taxibe teny an-tananany no namoizany ny fiara iray.
“Tsy maintsy mipoaka ny sarom-bilany”, hoy ny hika fanentanana izay.Tsy fomba fiteny fotsiny io fa efa tena mihatra mihintsy. Vilany foana tokoa ve no atokona tsy hipoaka ihany ny hiafaran? Ny antotanisa navoakan’ny Banky Iraisampirenena sy ny Firenena Mikambana no manambara fa malagasy efatra amin’ny dimy no mahantra, zara raha misakafo ambany foitra.Tsy mahagaga noho izany raha miraparapa toy ny liona mitady izay ho arapany ny olona. Tsy tohinina, mafana ra, ary lian’ady. Ireo no toetra ananan’ny malagasy ankehitriny.
Ka na ny pasitera Maihol, na Rasendrahasina, na iza na iza dia aza mba mifanena amin’ny malagasy mahantra ihany fa hanapoahany ny sarombilaniny. Tsy haharo anao amin’io na ny zandary, na ny fahefana anananao, na ny fivavahanao, na ny sikidinao, fa rehefa hipoaka io, dia aleo mangina sy mitady toerana mangina hakana saina tsara.
Photo piquée sur les réseaux sociaux
Tags: Krizy, MADAGASCAR, Maihol, Malagasy, politiqueCategories: politique, societé